Xubno Ku Hawlan Isku Soo Dhoweynta Dhinacyada Ku Kala Fogaaday Arimaha Doorashooyinka |
Xubno Ku Hawlan Isku Soo Dhoweynta Dhinacyada Ku Kala Fogaaday Arimaha Doorashooyinka
Warar soo gaadhay Hadhwanaagnews ayaa xaqiijiyey in madaxweyne ku xigeenadii hore ee somaliland oo is xilqaamay ay go’aansadeen inay dhex galaan mucaaridka iyo muxaafidka isla markaana xal u raadiyaan waxyaabaha ay isku khilaafsan yihiin.
Madaxweyne ku xigeenadii hore ee somaliland oo iyagu dhex dhexaadinta mucaaridka iyo muxaafidka bilaabay ayaa waxay wararku sheegayaan inay hada ku soo biireen xubno kale
oo iskugu jira masuuliyiin hore oo xilal ka soo qabtay xukuumadii kala dambeeyey ee dalka,akadamiga nabada iyo dallada ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf kuwaas oo xoojinaya dedaalada hada socda.
Wararka ayaa sheegay in madaxweyne ku xigeenadii hore oo hogaaminaya dhex dhexaadintani ay kulamo la qaateen hogaamiyeyaasha xisbiyada mucaaridka ah ee Ucid Iyo Waddani, kuwaas oo ka dhagaystay mawqifka ay ka taagan yihiin arimaha doorashada iyo aragtida ay ka qabaan guddida doorashooyinka qaranka.
Sidoo kale waxay kulan la qaateen xisbiyada Kulmiye iyo madaxweyne Muuse kuwaas oo dhinacooda soo bandhigay aragtiyaha ay qabaan.
Madaxweyne ku xigeenadii hore ee somaliland ayaa labada dhinac ee khilaafku u dhaxeeyo ku war geliyey inay kalsooni ku siiyaan aqbalaada go’aamo ay ka soo saari doonaan arimaha khilaafku ka taagan yahay marka ay kulamadooda dhamaystaan.
Labada dhinac ee khilaafku u dhaxeeyo ee mucaaridka iyo muxaafidka ayey wararku sheegeen inay xubnahan ay hogaaminayaan madaxweyne ku xigeenadii hore ay kalsooni ku siiyeen inay u hogaamsami doonaan wixii ay soo saaraan.
Xubnahan ay hogaaminayaan madaxweyne ku xigeenadii hore ee somaliland ayey wararku xaqiijiyeen inay maalmaha soo socda si deg deg ah ugu dhawaaqi doonaan go’aano ay ka gaadhi doonaan arimaha khilaafku ka taagan yahay ee ay ku kala fogaadeen mucaaridka iyo muxaafidku, iyada oo haatan dhamaystay kulamadii ay la lahaayeen labada dhinac.
Mucaaridka iyo muxaafidka somaliland ayaa hore ugu guul daraystay inay heshiis ka gaadhaan arimo la xidhiidha doorashooyinka iyada oo xisbiyada mucaaridku ay soo bandhigeen waxyaabo ay u arkeen in xal lagaga gaadhi karo doodihii ay qabeen balse xisbiga Kulmiye iyo madaxweyne Muuse Biixi ay ka hor yimaadeen iyaga oo aan keenin wax ay xal u arkaan oo aan ahayn mawqifyadii lagu kala tagay markii hore.
Dhinaca kale durba waxa la dareemayaa dhaqdhaqaaqyada la xidhiidha mudo kordhin loo samayn doono goleyaasha deegaanada dalka iyo golaha wakiilada, iyada oo madaxweyne Muuse Biixi uu maalinta sabtida ah kulan la yeelanayo xildhibaanada golaha wakiilada.
Si kastaba ha ahaatee waxa hubaal ah in doorashooyinkii goleyaasha deegaanada dalka iyo golaha wakiiladu ay dib u dhacayso isla markaana mudo kordhin aan la hubin inta ay noqon doonto ay samayn doonaan golaha guurtida somaliland.